i-South Africa ‘A’, ne-India ‘A’ balungele umdlalo wokuqala wemidlalo yezinsuku ezine
Umqeqeshi wama-Powerade South Africa ‘A’ u-Shukri Conrad uyavuma ukuthi abagxilile ekuhlulweni kwi-final ye-One-Day Triangular series bedlala ne-India ‘A’ ekuqaleni kwesonto kodwa, bagxile kwimidlalo emibili yezinsuku ezine ezoqala e-Assupol Tuks Oval ePitoli ngoMgqibelo.
Iqembu lasekhaya lahlulwa ngama-wicket ayisikhombisa kwi-final, efike emuva komqhudelwano ohlangene futhi iqembu elishintshe kakhulu libheke ukubuya uma selidlala nezivakashi.
Okokuqala, kunokapteni omusha, u-Aiden Markram, obuyile kwi-tour yakhe yokuqala nama-Standard Bank Proteas, kanti iqembu liphinde libe no-David Miller, u-Duanne Olivier, u-Dane Paterson no-Andile Phehlukwayo, nabo abadlale indima efanayo kwiqembu lezwe ezinyangeni ezimbalwa e-England.
u-Conrad uthi babheke phambili hayi emuva.
“Ibiyinhle i-one-day series nokho sihluliwe kwi-final,” kusho u-Conrad. “Ngicabanga ukuthi i-toss yadlala indima, kodwa ngakho konke bengijabulile.”
“Sinabadlali abasha abaningi, umdlandla omusha. Kunesipiliyoni esiningi lapha kuleliqembu lomdlalo wezinsuku ezine, futhi uma kukhulunywa ngokuziqeqesha okudlulile, ngakho kuzoba amasonto ambalwa amahle.”
u-Conrad uphinde akholwe ukuthi abadlali abasha akubona kuphela abangakhuphula iqembu. Ukholwa ukuthi isimilo ukhiye.
Ngaphandle kwabadlali ababaliwe, kunabanye abakhulile abafuna ukudlala kahle kwi-series. Abadlali abafana no-Stephen Cook no-Dane Piedt nabo bakhona futhi umqeqeshi uthi bonke bafuna ukudlala indima.
Unezezele wathi: “Angazi ukuthi kungabadlali abathile, konke okufunayo abadlali abafuna ukudlala indima, abadlali abafuna ukuba lapha futhi abadlali abafuna ukudlala.”
“Angifuni ukugqamisa oyedwa, kodwa ngesibonelo uma uthatha u-David Miller, okumele abekhona noma ikuphi emhlabeni kwiqembu lama-T20 futhi ukhethe ukuba lapha. Lokho kusho okunungi ngokuthi u-David ungubani okwamanje nokuthi ufuna ukuzuza ini uma kuqhutshekelwa phambili. Nginesiqiniseko sokuthi abanye abadlali bazoba nalokho.”
Umdlalo wokuqala wemdlalo yezinsuku ezine ususwe e-Sahara Park Willowmoore e-Benoni waya ePitoli ekuqaleni kwesonto.
-Iyer ongaphumile ushayele i-India A ukunqoba i-tri-series u-Zondo no-Conrad babheke kwi-final enzima SA ‘A’ edlale ngokuphelele ithole ukunqoba ngenye i-bonus point u-Markram uzohola i-SA A kwi-series yezinsuku ezine bedlala ne-India A India A ihlula i-South Africa A kumdlalo we-tri-series u-Shamsi uncoma abaphosayo be-SA ‘A’ u-Hendricks, no-Shamsi bahamba phambili njengoba i-SA ‘A’ ithole i-bonus point yesibili u-Conrad uyajabula ngalapho i-SA ‘A’ ibheke khona u-Phangiso no-Pretorius bahlanganisa ukunqoba nge-bonus-point kwi-SA ‘A’ u-Zondo ulungele i-A Triangular Series enenselelo